Biogas Waste kune Fertilizer Kugadzira Solution
Kunyange hazvo kurima kwehuku kwave kuri kuwedzera mukuzivikanwa mu Africa mumakore apfuura, chave chiri chiito chidiki-chidiki. Mumakore mashoma apfuura, zvakadaro, chazove chiitiko chakakomba, nevazhinji vechidiki vezvemabhizimusi vachinongedzera purofiti inokwezva yavanopa. Huku huwandu hwevanhu vanopfuura zviuru zvishanu ikozvino hwazara asi kuenda kune hombe-kugadzirwa kwasimudza kunetsekana kweruzhinji pamusoro pekurasa marara kwakakodzera. Iyi nyaya, zvinonakidza, zvakare inopa mikana yekukosha.
Kugadzirwa kwakakura-kwakaratidza zvinetswa zvakawanda, kunyanya izvo zvine chekuita nekurasa marara. Mabhizimusi madiki-madiki haakwezvi kutariswa kwakanyanya kubva kuzviremera zvezvakatipoteredza asi mashandiro ebhizinesi nenyaya dzezvakatipoteredza anodikanwa kutevedzera mwero mumwechete wekuchengetedza zvakatipoteredza
Sezvineiwo, dambudziko remarara emanyowa riri kupa varimi mukana wekugadzirisa dambudziko hombe: kuwanikwa uye mutengo wesimba. Mune dzimwe nyika dzemu Africa, maindasitiri mazhinji anonyunyuta nemutengo wakakwira wemagetsi uye vagari vazhinji vemumaguta vanoshandisa majenareta nekuti simba harivimbike. Iko kushandurwa kwemanyowa emarara kuva magetsi kuburikidza nekushandisa biodigesters rave tarisiro inokwezva, uye varimi vazhinji vari kutendeukira kwariri.
Shanduko yemarara emupfudze kuva magetsi inopfuura bhonasi, nekuti magetsi chinhu chinoshomeka mune dzimwe nyika dze Africa. Iyo biodigester iri nyore kubata, uye mutengo unonzwisisika, kunyanya kana iwe ukatarisa kune ayo marefu-mabhenefiti
Pamusoro peiyo biogas simba rekugadzira, zvisinei, biogas marara, inogadzirwa ne biodigester chirongwa, inosvibisa nharaunda zvakananga nekuda kwehuwandu hwayo, huwandu hwakanyanya hweammonia nitrogen uye organic chinhu, uye mutengo wekufambisa, kurapwa uye kushandiswa kumusoro. Nhau dzakanaka ndeyekuti biogas marara kubva ku biodigester ine kukosha kwekudzokorodza zvirinani, saka toshandisa sei zvizere tsvina yebiogas?
Mhinduro ndeye biogas fetiraiza. Tsvina yeBiogas ine mafomu maviri: imwe imvura (biogas slurry), inoverenga ingangoita 88% yeiyo yakazara. Chechipiri, masara akasimba (biogas masara), achiverengera angangoita gumi muzana muzana. Mushure mekurasa tsvina yebiodigester, inofanirwa kukamurwa kwenguva yakati (yechipiri kuvirisa) kuita kuti yakasimba uye mvura ipatsanurike zvakasikwa.Solid - mvura separator inogona zvakare kushandiswa kupatsanura mvura uye yakasimba masara ebiogas marara. Biogas slurry ine zvinhu zvinovaka muviri zvakaita senitrogen inowanika, phosphorus uye potasium, pamwe nekuteedzera zvinhu zvakaita se zinc nesimbi. Zvinoenderana nekugadzwa, iyo biogas slurry ine yakazara nitrogen 0.062% ~ 0.11%, ammonium nitrogen 200 ~ 600 mg / kg, inowanika phosphorus 20 ~ 90 mg / kg, inowanika potassium 400 ~ 1100 mg / kg. Nekuda kwekukasira kwayo kushanda, chiyero chakakosha chekushandisa, uye inogona kukurumidza kunyudzwa nezvirimwa, iri mhando yeakawanda ari nani kukurumidza kuita mupfudze. Solid biogas residue fetiraiza, zvinovaka muviri uye biogas slurry zvakangofanana, zvine 30% ~ 50% organic zvinhu, 0.8% ~ 1.5% nitrogen, 0.4% ~ 0.6% phosphorus, 0.6% ~ 1.2% potasium, asi zvakare yakafuma humic asidhi inopfuura 11%. Humic acid inogona kusimudzira kuumbwa kwevhu rakaunganidzwa chimiro, kusimudzira kubereka kwevhu nekukanganisa, kugadzirisa ivhu panyama uye makemikari zvivakwa, ivhu rekumutsiridza mhedzisiro iri pachena. Hunhu hwebiogas residue fetiraiza hwakafanana neyakajairwa fetiraiza, inova yeyakanonoka kuita fetiraiza uye ine yakanakira kwenguva refu.
Kugadzira tekinoroji yekushandisa biogas slurry kugadzira fetiraiza yemvura
Iyo biogas slurry inopomberwa mumushini wekuberekesa hutachiona hwe deodorization uye kuvirisa, uyezve iyo yakaviriswa biogas slurry inopatsanurwa kuburikidza neyakaomeswa-mvura yekuparadzanisa mudziyo. Iyo yekuparadzanisa mvura inoputirwa mukati meiyo elemental complexing reactor uye mamwe makemikari manyowa maficha akawedzerwa kune akaomarara maitiro. Iko kuomarara kwekuita kwemvura kunoputirwa mukati mekuparadzanisa uye kunaya system yekubvisa iyo insoluble tsvina. Iyo yekuparadzanisa mvura inoputirwa mukati meiyo elemental chelating kettle, uye zvisaririra zvinhu zvinodiwa nezvirimwa zvinowedzerwa kuitira kubiridzira kuita. Mushure mekuita kwapera, iyo chelate mvura inozoputirwa mutangi rapera kupedzisa kugadza uye kurongedza.
Kugadzira tekinoroji yekushandisa biogas masara kugadzira organic fetiraiza
Iyo yakasarudzika biogas masara yakasanganiswa nehuswa, keke fetiraiza uye zvimwe zvinhu zvakapwanywa kusvika kune imwe saizi, uye hunyoro hwemukati hwakagadziriswa kuita 50% -60%, uye iyo C / N chiyero chakagadziriswa kusvika 25: 1. Fermentation bacteria inowedzerwa mune yakasanganiswa zvinhu, uyezve izvo zvinhu zvikaitwa murwi we compost, hupamhi hwemurwi hausi pasi pemamita maviri, kukwirira hakusi pasi pe 1 mita, kureba hakuganhurwe, uye tangi aerobic Fermentation maitiro anogona zvakare kushandiswa. Teerera kune shanduko yeunyoro uye tembiricha panguva yekuvira kuti uchengetedze aeration mumurwi. Muchikamu chekutanga chekuvirisa, iwo mwando haufanire kunge uri pasi pe40%, zvikasadaro haibatsire mukukura uye kubereka kwehutachiona, uye hunyoro haufanire kunge hwanyanya, izvo zvinokanganisa kufefetedza. Kana kudziya kwemurwi kukwira kusvika 70 70, iyo compost Turner muchina inofanira kushandiswa kushandura murwi kusvikira waora zvachose.
Kugadzirwa kwakadzika kwe organic fetiraiza
Mushure mekuvirisa kwezvinhu uye kukura, unogona kushandisa fetiraiza inogadzira michina yekugadzirisa zvakadzama. Kutanga, inogadziriswa mupfu yakasviba fetiraiza. Iyonzira yekugadzira yeupfu hwakasanganiswa manyowa iri nyore. Kutanga, izvo zvinhu zvinopwanywa, uyezve zvakasviba mune izvo zvinhu zvinovhenekwa nekushandisamuchina wekuongorora, uye pakupedzisira kurongedza kunogona kupedzwa. Asi kugadzirisa mukatigranular organic fetiraiza, granular organic kugadzirwa maitiro kwanyanya kuomarara, yekutanga zvinhu kupwanya, kuongorora kunze tsvina, iwo maratidziro eiyo granulation, uyezve iwo ma particles e kuomesa, kutonhora, kupfeka, uye pakupedzisira pedzisa iyo kavha. Maitiro maviri ekugadzira ane zvazvakanakira nekuipira, hupfu hwekugadzira fetereza hwakareruka, mari yacho idiki, inokodzera fekitori ichangovhurwa yemanyowa.granular organic fetiraiza kugadzira maitiro yakaoma, iko kudyara kwakakwira, asi iyo granular organic fetiraira haisi nyore kuumbiridza, iko kushanda kuri nyore, kukosha kwehupfumi kwakakwira.
Post nguva: Jun-18-2021